အမှန်တရားကို သိစေချင်လို့ အဖွဲ့လိုက်စကားပြောထားတဲ့ Group Chat ကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ချမ်းချမ်း - Cele Gabar
” ဒီပုံတွေဟာ…ကျမတို့အားလုံး စပြီးသီချင်းသွင်းတဲ့နေ့ကစပြီးပြောထားတဲ့ စာတွေ..ပုံတွေပါ..ဒါသက်သေပါပဲ…ဘယ်သူ့ကိုမှ စော်ကားလိုခြင်းမရှိပါ…. အဖြစ်မှန်ကတော့ ဒါပါပဲ…တခါမှ ကိုယ်တွေ အဆိုတော်တွေနဲ့ meeting မှာ mv ဇာတ်လမ်းရိုက်မယ့်အကြောင်းလည်းမပြောခဲ့ပါ…ဒါပေမဲ့ အကို့မှာပြောလို့မရတဲ့နောက်ကွယ်က အကြောင်းတရားတွေရှိတာကို အခုသိလိုက်ရလို့ သနားသွားမိတယ်….. တကယ်စိတ်ရင်းပါ..အကို အနေရကျပ်နေတဲ့အခြေနေကို ညီမကမသိဘဲ အမှန်တွေပြောလိုက်တယ်ဆိုတာလည်း တကယ်မလုပ် မဟုတ် တဲ့အတွက် တခြားသူတွေလည်း မထိခိုက်စေချင်လို့ပါ..ညမတို့ အကို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်..ဒါပေမဲ့ အကို ဇာတ်လမ်းထည့်မယ်ဆိုတာကိုတခါမှ group chat မှာမပြောခဲ့ဘူးတာတော့ အမှန်အတိုင်းပြောစေချင်ပါတယ်…. ရိုက်ကူးရေးကဓာတ်ပုံလေးတပုံနှစ်ပုံပို့ပေးတာနဲ့တဖွဲ့လုးံကို ဇာတ်ညွှန်းပြတိုင်ပင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့နည်းနည်းများသလားလို့ပါ….. edit မှာရိုက်တုန်းကမပါတာတွေထပ်ထည့်တာရော…တခြားကဒ်တေပါလာတာတေကြောင့် ညီမတို့ရှင်းရတာပါ.. အကိုညီမကိုမုန်းနိုင်ပါတယ်…. ပရိသတ်တွေလည်း မုန်းနိုင်ပါတယ်..အရာရာဟာအခုရှုပ်မှနောင်ရှင်းမှာမို့လို့ပါ… ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒါနောက်ဆုးံပါပဲ..အမှန်တရားကအကို့ဘက်မှာရှိပါစေ..အမုန်းခံထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်… အားလုးံနားလည်နိုင်ပါစေ” လို့ရေးသားကာ စကားပြောထားတဲ့ Group Chat တွေကို မျှဝေဖော်ပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ..
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Chan Chan, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, yone lay, ချမ်းချမ်း, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ အိုးကိုင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ မိုင်းမိုင်ဆိုင်း
Next post မွေးနေ့လေးမှာစည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက် အလှူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လင်းလင်း